I-AL d'Cacilhas Studio Rua Candido dos Reis
Almada, Setúbal, i-Portugal
Isitudiyo esisha esimangalisayo eCacilhas:Indawo enhle!
Jabulela & Uzizwele i-Lisbon njengendawo yasendaweni. 2 min ukuhamba ngezinyawo ukuya esiteshini sesikebhe saseCacilhas. Imizuzu engu-7 ugibela isikebhe u-Cacilhas uya e-Caís do Sodré- yedolobha lase-Lisboa: i-metro, i-tranvia, isitimela nesiteshi sebhasi ukuze uhambe yonke indawo unqamule i-Lisboa, i-Sintra, i-Cascais, i-Belém njll. Uhambo lwemizuzu emi-2 ukuya esitobhini olukuyisa kwenye ye amabhishi amahle kakhulu e-Portugal, i-Costa da Caparica Beach ngemizuzu engama-20.
25mts2 Isitudiyo esisha esinakho konke okudingayo! Umshini wokuwasha ukuze ungachithi isikhathi uphuma uyowasha. Umbhede wendlovukazi ongu-1.60 onethezekile, ikhishi, itafula lokudlela, umshini wokuwasha, i-wifi, indlu yokugezela, usofa, i-TV kanye novulandi omuhle ukuze ujabulele ukudla kwasekuseni noma uphumule.
I-Cacilhas iqashelwa abantu bendawo base-Lisbon, njengendawo yokudla ukudla okusha kwasolwandle okumangalisayo, futhi ujabulele ukubukwa okuhle nokushona kwelanga kwe-Lisbon, iBridge, Cristo Rei & Belém.
Bheka zonke izindawo zokudlela ezinhle namabha ngenkathi ujabulela umfula, nokubuka noma idolobha.
Sihamba kakhulu ngakho sithemba ukuthi sizoba nethuba lokuhlangana nawe. Ezimweni eziningi siyazihlola, ukuze sikunethezeke futhi ube nokuvumelana nezimo.
Inombolo yepholisi: 80019/AL